ကောင်းမွန်ဝင်း: ဈေးကွေ့ ပါလား
တနေရာမှာတော့ ကားက မှတ်တိုင်က အထွက် အောက်ကို ခဏဆင်းရပ်နေတဲ့ နောက်ပေါက်က အမျိုးသားတွေက အလုအယက် ခြေတစ်ဘက်ကို နင်းရင်း ခိုလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ၊ “ဟာ” “အာ” ဆိုတဲ့ အသံတွေထွက်လာတာနဲ့ အတူ၊ ကျွန်မကအစွန်ဆုံးမှာထိုင်တဲ့သူမို့ အဖြစ်အပျက်ကို မြင်လိုက်ရပါတယ်။ ခိုလိုက်တဲ့အထဲက တစ်ယောက်က ပုဆိုးကျွတ်ကျသွားတာပါ။ ခြေနင်းခုံမှာ ပုဆိုးလေးကို အပုံလိုက်တွေ့ရတဲ့ အချိန်ကစပြီး ခေါင်းကို အရမ်းငုံ့ထားလိုက်ပါတယ်။ ။ နားထဲမှာ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ကြားနေရတာတွေကတော့၊
စပါယ်ယာ လူရွှတ် ၊ “ကိုယ်နဲ့ ပါတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ဂရုစိုက်နော်၊ ခါးပိုက်နှိုက်ကသောင်းကြမ်းနေတယ်၊ တွေ့လို့ကအကုန်ယူမှာ ” “ ဟိုအစ်ကို အဆင်မပြေရင်ပြောနော် ကားရပ်မယ် ၊ ရလား”
အမျိုးသားတစ်ယောက်အသံ“ မရပ်နဲ့ ဒီအတိုင်းလေး ပြန်ဆွဲတင်လိုက်လေ” နောက်တစ်ယောက် “ ရပ်လို့မဖြစ်ဘူးလေ။ ဒါက၊” နောက်တစ်ယောက်“ အိုကေသွားပြီ”။ စပါယ်ယာ။ ။ “မှတ်တိုင်လေးတွေ အော်ထားမယ် နော်” “ကျောင်းရှေ့၊ ကျောင်းရှေ့ ပါလား” “ဆွဲဆရာရေ”
“ ဟာ၊ သေပြီ တလွဲတွေ ဈေးကွေ့၊ ဈေးကွေ့ ပြောတာဗျို့ ဈေးဂွေ့ပါလား၊ ဟူး ----မလွယ်ပါဘူး မနက်စောစောစီးစီး သည်းထိတ်ရင်ဖိုတွေဖြစ်ထားလို့”
တစ်ချို့ အမျိုးသားတွေရဲ့ ရီသံတွေနဲ့ အတူ စပါယ်ယာရဲ့ စကားတွေ၊ အခြားစကားသံတွေနဲ့ အတူ ကားခေါင်းခန်းက ကားမောင်းဆရာရဲ့ စပီကာကနေထွက်လာတဲ့ “ သဘောပေါက်တယ်။ သဘောပေါက်တယ်၊ စိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထား ကောင်လေးရေ” တဲ့။
ဒီအဖြစ်အပျက်ကို ကားပေါ်မှာ မရီခဲ့ပေမယ့် (ရီရမှာရှက်လို့လေ) ကျောင်းရောက်တော့ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပြပြီး ကျွန်မရီမိပါတယ်။ အခုတော့ သင်ထားဘူးတဲ့ စာရဲ့သဘောတရားနဲ့ လက်တွေ့ကိုပေါင်းစပ်တော့မှာမို့ ဒီပို့စ်မှာရေးချလိုက်ပါတယ်နော်။
ဂျပန်မှာကျောင်းတက်တော့ ဒီလိုဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလည်း ဆိုတာကို သင်ရပါတယ်။ လူတွေရဲ့ အပြောမှား၊　လျှာခေါက်သွား( slip of tongue )တတ်တဲ့ သဘာဝ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ပို့စ်မှာ အဖတ်မှားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးရေးခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာဘာသာမှာတော့ ဗျည်းနဲ့ သရအသံထွက်၊ အက္ခရာနေရာများကိုမှားပြောတတ်သလို၊ အခြားဘာသာများမှာလည်း အသံမှားတာတွေရှိပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုမှာလည်း စကားလုံးဝေါဟာရရဲ့ ပထမစာလုံးမှာတာမျိုးပါ။ ဒီဖြစ်စဉ်ကို Spoonerisms လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအနေနဲ့ နံမည်ကျော် ဥပမာတွေထဲက တစ်ခုကိုတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
Oxford တက္ကသိုလ် New College ကျောင်းအုပ်ကြီး W.A.Spooner(1844～1930) ပြောခဲ့တာပါ။
You have missed all my history lectures. You have wasted the whole term. Please leave Oxford on the next down train.
“မင်း ငါ သင်တဲ့ သမိုင်းဘာသာ အတန်းချိန်တွေ အားလုံးပျက်ကွက်ခဲ့တယ်။ မင်းရဲ့ ကျောင်းခေါ်ချိန်တွေ အလကား ဖြစ်သွားပြီ။ အခုလာမယ့် ရထားနဲ့ အောက်စဖို့ဒ် က နေ မင်းပြန်ပေတော့။
ဒါပေမယ့်လို့ စိတ်တိုပြီး တကယ်ပြောဖြစ်သွားတာက you have ရဲ့ နောက်ပိုင်းက စကားလုံးတွေကို ပထမဆုံးစာလုံးချင်း အထားအသိုမှားသွားပြီး ထွက်သွားတဲ့ အသံကတော့
You have hissed all my mystery lectures. You have tasted the whole worm. Please leave Oxford on the next town drain.
“မင်း ငါ့ရဲ့ စိတ်ပျက်စရာ စာသင်ချိန်ကို -ရှီး- လို့ပြောပြီး ထွက်သွားတယ်။မင်းက ပိုးကောင်တစ်ကောင်လုံး စားလိုက်တာကိုး။ ဟိုဘက်မြို့ က မြောင်း ဖြတ်ပြီး အောက်စဖို့ဒ်ကနေ ထွက်သွားပေတော့” ဆိုတဲ့ အဓိပါယ်ဖြစ်သွားပါတယ်။
မတော်တဆဖြစ်မှု တစ်ခုခု၏ စိတ်အာရုံမှာထင်ကျန်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ တစ်စုံတရာကို မပြောဆိုခင်အချိန်မတိုင်မီမှာ လုပ်ခဲ့ ၊ ဖြစ်ခဲ့၊ တွေ့ကြုံခဲ့မှု ရဲ့ ဂယက်ရိုက်မှုကြောင့်လည်းကောင်း၊ ပြောဆိုနေစဉ်အချိန်အတွင်း စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်လည်းကောင်း သာမန်လူများဟာ အပြောမှား။ အရေးမှား၊ အဖတ်မှား၊ အကြားမှားခြင်းတွေကို မိခင်ဘာသာစကားသုံးစွဲရာမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အလားတူ အကြောင်းရင်းများကြောင့် ဘာသာခြားစကားကိုပြောဆိုရာမှာလည်း ဖြစ်ပွါးလေ့ရှိပါတယ်။
မသိစိတ်ကနေ ဒီလိုအမှားတွေဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုပေမယ့် တစ်ဘက်နေပြန်တွေးမယ်ဆိုရင်လည်း မသိတဲ့စိတ်မှာထင်ကျန်နေတဲ့ စိတ်ပညာနဲ့ ဘာသာဗေဒတို့ရဲ့ ဆက်စပ်မှုကို လွယ်ကူစွာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် လူတစ်ယောက်ရဲ့ အပြောအဆိုတွေ နည်းနည်း မှားယွင်းတဲ့ အခါမှာ ကျွန်မတို့ အရပ်ပြောအရ “ဆေးလှုပ်သောက် ရဲ့ လား” လို့ စိတ်အခြေအနေ ပုံမှန်ရှိသလားဆိုတာမျိုး နောက်ပြောင်တတ်ကြခြင်းဖြစ်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Tuesday, August 10, 2010
ချက်ချင်းရောက်လာသတည်း.. ။ ဟုတ်တယ်နော်.. တခါတလေ ကိုယ့်စကားမှားရင် အူရွင်နေတဲ့အချိန်ဆို ရယ်စရာ ဖြစ်ပေမဲ့ စိတ်အခန့်မသင့်ရင် ဒေါသ တပါးသူအပေါ် ပုံတက်တာလည်း ရှိတက်သေးရဲ့..။
အောက်စဖို့ဒ် လေးက ဥပမာ လည်း သေချာ ဖတ်ပြီး သဘောကျသွားတယ်..။
နော်ဝေးမှာတော့ စိန်ဗေဒါတို့က နော်ဝေးစကားကို အော်တို မှားနေကျဆိုတော့ ပြင်ရမှာတွေများပါ့ ညီမရေ..။ ဒါကြောင့် သူတို့လူမျိုးတွေ တခါတခါ ပြုံးစိစိနဲ့ လုပ်ကြတာပေါ့..။ သိနေတယ်လေ........။
ဘတ်စ်ကားပေါ်က အဖြစ်အပျက်ကတော့ မျက်ရည်တောင် ထွက်မတတ်ရယ်မောမိပါတယ်...
အဲဒီမြင်ကွင်းကို သေချာမြင်လိုက်တယ်ဟုတ်? :)
မြင်ကွင်းက သေချာကော ရှင်းရဲ့လား။း))
အဲဒီကားက ၃၆ (သို့မဟုတ်) ၃၇ ဟိုင်းလပ်ကားလေးဘဲ ဖြစ်မှာပေါ့ အမ။
အင်းးး ရယ်ပြီးပြန်သွားတယ်။းဝ)
လမ်းမတော်က နေ ပန်းဆိုးတန်းသွားတာ .သမတရုပ်ရှင်ရုံရောက်သွားတယ် ဟီး..
ရီစရာ ကောင်းလိုက်တာ ညီမရေ
ဖတ်ပြီး ရီပြန်သွားတယ် အင်း ဒေါသကြောင့်လည်း မှားတတ်တာဘဲ စကားတင်မကဘူး အရာရာ ပေါ့
ဟိုးတုန်းက ဦးလှဝင်း တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် ဘောလုံးပွဲ ကျေညာတော့လည်း "မကွေးက ဂိုးသမား"ကို "မဂိုးက ဂွေးသမား"လို့ ကျေညာတယ်လို့ လူကြီးတွေပြောပြတာ ကြားဖူးတယ်။